UTHANDO lwakhe lokunakekela abantu abahlukumezekile ngezindlela azehlukene kwaholela uNkk Abegail Mbongwa-Dlame waKwaNdengezi ekuthi ashiye umsebenzi wokubhaka asungule inhlangano eyaziwa ngokuthi yiThembeni Crisis Centre.
“Ngesikhathi ngingela lo mncintiswano wawuse Maharani Hotel ngo-1996 eThekwini ngaphuma phambili ngathola umfundaze wokufundela izifundo zokuthuthukiswa komphakathi phecelezi i-community development ngo 1997.
“Sasibhekene nenselelo enkulu ngaleso sikhathi ngoba amalungu ethu ayeshona maphakathi ne-project abanye beshonelwa amalungu emindeni yawo ngenxa yesifo sesandulela ngculazi. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu kithina ngoba kwakuphazamiseka umsebenzi sesiwuqalile.”
“I-eThembeni Crisis Cenre yabhaliswa ngokusemthethweni ngo-2003 saqeqesha amalungu omphakathi. Kwathi ngo-2004 i-Operation Jump Start yasitholela indawo yokuthi sikwazi ukuqhuba umsebenzi khona KwaNdengezi. Ngo-2006 sathola isabsidi evela kuMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kuwo lowo nyaka.
“Saxoxisana nabakwa-Independent Development Trust [IDT] ukuze besilekelele ekusizeni laba besimame ukuthi bekwazi ukuzimela. Abakwa-IDT basugula umsebenzi wokuthi abasimame bakiline imvelo bese bebaholele imali ezobalekelela ezintweni abazidingayo.
Uthe isifiso sakhe wukuthi bethole indawo esedholobeni ngoba babhekene nenselelo enkulu futhi enobungozi njengoba beselokishini.
“Njengoba le nhlangano ibe nemikhankaso eyehlukene kubalwa ukuqwashisa abantu besimame ukuthi bengavumi uma owesilisa athandana naye efuna ukuya ocansini ngaphandle kokusebenzisa ijazi lomkhwenyana. Siyabaluleka ukuthi ngaphambi kokwenza lokho kumele bobabili behlole igazi emtholampilo ukuze bengazitholi sebe nesifo sesandulela ngculazi noma izifo zocansi. Inkinga iqala mase sihlaselwa abanye besilisa besisabisa ngokuthi bazosishaya ngoba zitshela amakhosikazi abo ukuthi bengayi nabo ocansini. Singajabula uma singathola enye indawo ukuze siqhube lo msebenzi ngokuthula.